Ijaarsi siidaa Yaadannnoo goota Oromoo Jenaraal Waaqoo Guutuu magaalaa Roobeetti eegalame - ETHIOPIANS TODAY
Ijaarsi siidaa Yaadannnoo goota Oromoo Jenaraal Waaqoo Guutuu magaalaa Roobeetti eegalame
Ijaarsi siidaa Yaadannnoo goota Oromoo Jenaraal Waaqoo Guutuu Birrii miiliyoona 21.8n magaalaa Roobeetti eegalameera.
“Gabrummaa hidddaan buqqisna dadhabnu Ilmaan itti guddifna” jedhe gootni baddaa Baalee Jenaraal Waaqoo Guutuu: Ijaarsi siidaa Yaadannnoo bakka Ministir Deettaan Ministeera Geejjibaa Ityoophiyaa obbo Kaasaahuun Goofee argamanitti eegalameera.
Akka Waajjirri kominikeeshinii godinichaa beeksiseetti obbo Kaasaahuu Goofee akka jedhanitti Baalee dachee hangafa qabsoo Oromooti gootonni baddaa baalee fi gammoojjii baalee saba isaaniitiif aarsaa kafalan kabajaa fi yaadachuu isaaniif mala jedhan.
Qaanqee diddaa gabrummaa isaan qabsiisanii sirna habasha mootii waaqarra argamne ofiin jedhu cunqursaa siyaasa fi diinagdee ofirraa qolachuu xayyara harcaasanii dhalooni hardhaas qabsoo itti fufee araat kiiloo seene.
Qabsoo injifannoo golabame diinagdee badhaadhinaatiin ceesisuuf Baalee xiyyeffanna addaatii gama hundaa misoomaa jirti jedhan. Badhaadhinni akka biyyaatti eegalame akka itti fufuu Badhaadhina filachuu ifa filachuudha Ampuuli ifu filadhaa jedhaniiru.
Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Roobee obbo Gazzaheny Dajanee akka jedhanitti Siidaa yaadannoo goota Oromoo Waaqoo Guutuu ijaarsisuuf marii qaamota gara garaa waliin mariim taasifamaa kan turee fi ijaarsi isaas yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramuudha jedhan.